Calanka Soomaliya oo mudo sedex maalin ah hoos loo dhigayo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Calanka Soomaliya oo mudo sedex maalin ah hoos loo dhigayo
Calanka Soomaliya oo mudo sedex maalin ah hoos loo dhigayo
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta guddoomiyay shir ay isugu yimaadeen guddiga qabanqaabada aaska Qaran ee loo sameynayo Alle ha u naxariistee Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka, Xasan Abshir Faarax oo shalay ku geeriyooday dalka Turkiga.
Shirka ay isugu yimaadeen ayey Guddigu uga hadleen keenista meydka iyo aaska qaran ee lagu maamuusayo Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir oo ku geeriyooday dalka Turkiga.
Dowladda ayaa go’aamisay in mudda sedex maalin ah calanka hoos loo dhigo si loogu Baroor diiqo Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka, Xasn Abshir Faarax oo qeyb muhiim ah ka qaatay dib-u-yagleelidda dowladnimada Soomaaliya.
Allaha u naxariistee Xasan Abshir Faarax oo ahaa siyaasi rugcadaa ah ayaa soo noqday Gudoomiyihi gobolka Banaadir iyo Ra’isul Wasaarihii dowladii Carte, waxa uu sidoo kale soo qabtay xilal kale oo dowladeed.
Maqaal horeGoormee dib loo furayaa Xarunta CID-da
Maqaal XigaKulamo u dhaxeeya Madaxda Maamul Goboleedyada oo ka socda Dhuusamareeb